ဦးဇုန်လှယ်ထန်း | အမျိုးသားလွှတ်တော်
၂။ အမည် - ဦးဇုန်လှယ်ထန်း
၄။ လူမျိုး/ဘာသာ - ချင်း/ခရစ်ယာန်
၅။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ် - ၄/ ဖလန(နိုင်) ၀၀၆၃၅၇
၆။ မွေးသက္ကရာဇ် / အသက် - ၁၃-၁၁-၁၉၇၃ / (၄၅) နှစ်
၇။ မွေးဖွားရာဇာတိ - ဖလမ်းမြို့၊ ချင်းပြည်နယ်။
၈။ ပညာအရည်အချင်း - B.Sc (Ygn), B.Th.(Spore), MA.Theo (Ygn), IVLP (USA)
၉။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင် - ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်
၁၀။ အဘအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဦးဗန်နွှဲလျန်၊ FLM-005567 ၊ တောင်သူ
၁၁။ အမိအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - ဒေါ်ဆုန်ကျင်ဒေါင်၊ ၄/ဖလန(နိုင်) ၀၀၄၁၉၆၊ မှီခို
၁၂။ ဇနီး(သို့) ခင်ပွန်းအမည် / မှတ်ပုံတင်အမှတ် / အလုပ်အကိုင် - မရှိပါ
၁၄။ အမြဲတမ်း နေရပ်လိပ်စာ - အမှတ်(၁၅၉) သစ္စာ(၅)လမ်း၊ ၃၉(အေ) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အ.ထ.က(၁) ဖလမ်း(မူလတန်း)၊ အ.ထ.က(၁) ဖလမ်း (အလယ်တန်း)၊ အ.ထ.က(၂)အင်းစိန်(၁၀)တန်း၊ သိပ္ပံဘွဲ့(ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်)
ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ၂၀၁၀-၂၀၁၄၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၂၀၁၁ -၂၀၁၅။
Contact to ဦးဇုန်လှယ်ထန်း
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့(IPU)ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆံဆက်ရေး၊ လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇုန်လှယ်ထန်းအား နိုင်ငံတကာပါလီမန်များအဖွဲ့(IPU) အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် MR. MARTIN CHUNGONG လာရောက်တွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇုန်လှယ်ထန်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား ရန်ကုန်မြို့၊ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E STEVE MARSHALL နှင့် နယူးဇီလန်နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အရှေ့တောင်အာရှဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် MR. STEPHEN HARRIS တို့က လာရောက်တွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇုန်လှယ်ထန်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များအား ရန်ကုန်မြို့၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E MR.SCOT MARCIEL ဦးဆောင်သောအဖွဲ့က လာရောက်တွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇုန်လှယ်ထန်းနှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပညာရေးမြှင့်တင်မှုကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်တုတ်တို့အား အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်မြို့ အခြေစိုက်၊ မြန်မာ-အမေရိကန်လူမျိုးများ ကွန်ယက်အသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မင်းနိုင်နှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသခင်ခိုင်ဘွားတို့က လာရောက်တွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇုန်လှယ်ထန်းအား မြန်မာပြည်ပ အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်က လာရောက်တွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်း ချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇုန်လှယ်ထန်းအား ရန်ကုန်မြို့၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီး H.E. MR. MOHAMMAD SUFIUR RAHMAN က လာရောက်တွေ့ဆုံ
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇုန်လှယ်ထန်းအား MR. JEAN- MARC BRULE, CHAIRMAN, (GREEN LOTUS FOUNDATION) MP OF PARIS REGION FROM GREEN PARTY က လာရောက်တွေ့ဆုံ